सुत्केरी बिदा पर्याप्त र प्रभावकारी बनाऊ | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण सुत्केरी बिदा पर्याप्त र प्रभावकारी बनाऊ
लेख | दृष्टिकोण 1,964 views
सुत्केरी बिदा पर्याप्त र प्रभावकारी बनाऊ
कुपण्डोलको एक प्रतिष्ठित विद्यालयमा झण्डै १० वर्ष काम गरेकी एक शिक्षिकाले सुत्केरी बिदा नपाएपछि सुत्केरी हुनु केही दिन अघिदेखि नै काम छोडेर बस्नुपर्‍यो । नाम चलेको विज्ञापन एजेन्सीमा काम गरिरहेकी एक महिला कर्मचारीले २ महीनाको सुत्केरी बिदा त पाएकी थिइन् । सुत्केरी बिदापछि केही समय जागीर पनि खाइन् । तर, भर्खरै जन्मेको नाबालक छोरा हेर्न घरमा कोही नहुँदा जागीर नै छोडेर घरमै बस्नुप¥यो । विद्यालय जाने उमेरका तर साना सन्तान भएका महिला कर्मचारीका पनि समस्या कम छैनन् । छोराछोरीको बिदा हुँदा उनीहरूलाई हेर्न अफिसमा बिदा लिएर बस्नुपर्ने वा बच्चाबच्चीलाई आफूसँगै कार्यालयमा ल्याउनुपर्ने स्थिति छ ।
यी रोजगार विवाहिता महिलाले दिनँहु भोगिरहेका समस्याका उदाहरण मात्र हुन् । घर छोडेर अन्यत्रै जिल्लामा बसिरहेका, एकल परिवार अनि श्रीमान् श्रीमती दुवै जना काम गर्ने परिवारमा यस्ता समस्या धेरै पाइन्छ । छोराछोरी हेरिदिने कोही नभएपछि उनीहरूको लालनपालनकै लागि भनेर करियरमा विश्राम लिएर घरमै बस्न बाध्य महिला धेरै भेटिन्छन् । नेपालको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबारमा महिला÷कर्मचारीका ससाना छोराछोरी हेरिदिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्यत्र रहेका सरकारी कार्यालयमा यस्तो व्यवस्था छैन । सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने महिलाका पनि समस्या होलान् । तर, बिदा, पेन्सनलगायत विभिन्न सुविधाको लोभले पनि खाइरहेको जागीर हत्तपत्त कसैले छोड्दैनन् । घरपरिवारका सदस्यले पनि सरकारी सेवामा भएको जागीर सकेसम्म छुट्न दिँदैनन् ।
तर निजीक्षेत्रमा यस्तो हुँदैन । घरायसी समस्याका कारण छोराछोरी जन्मेपछि काम चटक्कै छोड्नेको सङ्ख्या धेरै छ । अलिक वर्ष सन्तान हुर्काएपछि केही वर्षको अन्तरालमा अर्को बच्चा पनि हुर्कायो । यसो गर्दैमा ५/७ वर्ष बितिसक्छ । आफूसरहका साथीभाइहरू करियरलाई निरन्तरता दिँदै निकै माथि पुगिसक्दा फेरि शुरूबाट काम थालनी गर्दाको पीडा त छँदै छ । पछि प्रतिस्पर्धामा आएर जागीरलाई निरन्तरता दिन पनि सोचेजस्तो सजिलो छैन । केहीले कामलाई निरन्तरता दिए पनि कार्यालय र छोराछोरीको हेरचाहबीच तालमेल मिलाउन नसक्दा कार्यालयमा उनीहरूको दैनिक प्रस्तुतिमा समस्या देखिएका छन् ।
सिंहदरबारमा भएजस्तै अन्य सरकारी र निजीक्षेत्रका कम्पनीमा समेत धेरै महिला कर्मचारी भएका कार्यालयमा छोराछोरी हेरिदिने व्यवस्था भएदेखि माथि उल्लिखित समस्याका कारण महिलाले काम छोड्नुपर्दैनथ्यो । अझ महिलाले जस्तै गरी पुरुषलाई पनि बालबच्चा हेर्न निश्चित समय बिदा दिने हो भने यो समस्या अलिक कम हुन्थ्यो कि ? हुन त धेरैजसो कार्यालयले बाबु बनेपछि पुरुष कर्मचारीलाई पनि १५ दिनको पितृत्व बिदा दिने गरेका छन् । बच्चाबच्ची हेर्नकै लागि चाहिँ अरू बिदा दिने चलन छैन । तर, त्यति बेला बच्चा निकै सानो हुन्छ । अस्पताल बस्नुबाहेक घरमा खासै धेरै काम हुँदैन । त्यसैले महिलाको सुत्केरी बिदा सकिएपछि वा पिताले स्याहार्न सक्ने भएपछि बिदा दिने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । महिलालाई मात्रै सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्थाले बच्चा महिलाले मात्रैै हेर्नुपर्छ भन्ने संस्कारलाई बलियो बनाउँदै गएको छ । बच्चाको लालनपालनमा आमाबाबु दुवैको बराबरी हिस्सा हुनुपर्ने हो ।
यसका लागि सरकारले सरकारी क्षेत्रका पुरुष कर्मचारीलाई बच्चा हेर्न भनेर थप पितृत्व बिदा दिने व्यवस्था थाल्नुपर्छ । कानून नै ल्याएर निजीक्षेत्रलाई पनि यस्तो बिदा दिन लगाउन सकिन्छ । गतवर्ष बेलायतको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनी अविभाले बच्चा जन्मिएका वा साना बालबालिका एडप्ट गरेका अभिभावक (महिला र पुरुष) दुवैलाई बच्चा स्याहार्न १ वर्ष बिदा दिने घोषणा गरेको थियो । यस्तो बिदा पूरै तलबी भने थिएन । यसमध्ये आधा अर्थात् २६ हप्ताको बिदा मात्रै तलबी थियो । बाँकीका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । हाम्रो देशमा पनि यस्तै खालको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । महिलालाई दिने सुत्केरी बिदामध्ये अहिले पाइरहेको बिदा तलबी गरेर बाँकी केही अवधिको बिदा बेतलबी वा आधारभूत तलबको केही प्रतिशत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले सन् २००० मा सुत्केरी सुरक्षा सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई १४ हप्ताभन्दा थोरै नहुने गरी महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी बिदाको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । तर, विश्वका अधिकांश देशले २ महीनाकै सुत्केरी बिदा दिइरहेका छन् । बेलायत सुत्केरीका लागि सबैभन्दा राम्रो मुलुक हो । त्यहाँ ५२ हप्ताको बिदा दिइन्छ । यसमध्ये कुल ३९ हप्ता तलबी हो । पहिलो ६ हप्तामा ९० प्रतिशत तलब दिइन्छ । बाँकी ३३ हप्तामा चाँहि १ सय ४० पाउण्ड वा औसत साप्ताहिक कमाइको ९० प्रतिशतमध्ये जुन थोरै हुन्छ त्यही दिइन्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा २६ हप्ता (१ सय ८२ दिन) मातृत्व बिदा दिइँदै आएको छ । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले पहिलादेखि नै यो सुविधा उपभोग गर्दै आएको भए पनि निजीक्षेत्रमा भने अप्रिलतिर मात्रै मातृत्व बिदा दोब्बरभन्दा धेरै बढाएर २६ हप्ता पु¥याउने निर्णय गरिएको थियो । चीनले पनि १४ हप्ता (९८ दिन) बराबरको सुत्केरी बिदा दिँदै आएको छ । अब नेपाल सरकारले पनि महिला कर्मचारीका लागि सुत्केरी बिदा बढाउनेतर्फ सोच्ने बेला आएको हो कि ?
#विश्वमा सुत्केरी बिदाको व्यवस्था